द डार्क नाइट (चलचित्र) Info. About. What's This?
ⓘ द डार्क नाइट (चलचित्र)
द डार्क नाइट क्रिस्टोफर नोलनद्वारा निर्देशित, निर्माण र सह-लिखित सन् २००८ को सुपरहिरो चलचित्र हो। डिसी कमिक्स चरित्र ब्याटम्यानमा आधारित, चलचित्र नोलनको द डार्क नाइट ट्रिलोजीको दोस्रो भाग हो र २००५ को ब्याटम्यान बिगिन्सको उत्तरकथा हो, जसमा क्रिस्टियन बेल, माइकल केन, हिथ लेजर, गेरी ओल्डमन, एरन एकहार्ट, म्याग्गी जिलेनहाल र मोर्गन फ्रिम्यानले अभिनय गरेका छन्। चलचित्रमा ब्रुस वेन / ब्याटम्यान, पुलिस लेफ्टिनेन्ट जेम्स गोर्डन र जिल्ला अटर्नी हार्वे डेन्ट गोथम शहरमा सङ्गठित अपराध उन्मूलन गर्न एक गठबन्धन गठन गर्छन्, तर जोकर भनेर चिनिने एक अराजकतावादी मास्टरमाइन्डले धम्की दिन्छन्, जसले ब्याटम्यानको प्रभावलाई कमजोर पार्दछ र शहरलाई अराजकतामा पार्दछ।
जुलाई १८, २००८ मा प्रदर्शित भएपछि, द डार्क नाइटले महत्त्वपूर्ण आलोचनात्मक र व्यावसायिक सफलता हासिल गरेको थियो। विश्वव्यापी १ अर्ब डलरभन्दा बढीको आम्दानीको साथमा, यो २००८ को सबैभन्दा बढी कमाउने चलचित्र बनेको थियो र अहिलेसम्मको ४६औं सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र हो, जुन मुद्रास्फीतिको लागि अनुपयुक्त छ प्रदर्शनको समयमा चौथो; यसले १५८ मिलियन डलरको साथ सबैभन्दा बढी कमाउने घरेलु उद्घाटनको कीर्तिमान पनि स्थापित गरेको थियो, जुन तीन वर्ष सम्म आयोजित गरिएको थियो। ८१औं एकेडेमी पुरस्कारमा, चलचित्रले आठ नामाङ्कनहरू प्राप्त गरेको थियो; यसले सर्वश्रेष्ठ ध्वनि सम्पादन पुरस्कार जितेको थियो र लेजरलाई मरणोत्तर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताबाट सम्मानित गरिएको थियो। द डार्क नाइटलाई यसको दशकको सर्वश्रेष्ठ चलचित्रहरू मध्ये एक र अहिलेसम्म निर्मित एक सबैभन्दा राम्रो सुपरहिरो चलचित्र मानिन्छ। ट्रिलोजीको अन्तिम चलचित्र द डार्क नाइट राइजेज जुलाई २०, २०१२ मा प्रदर्शित भएको थियो।
नकाबधारी लुटेराको समुह गोथम शहरको बैंक लुट्छन र बैंक लुटे पछि एक अर्कालाई मार्छन्। अन्तिम लुटेरा बाच्नु भन्दा पहिले, असली जोकर सबैलाई मारेर लुटेको सबै पैसा लिएर फरार हुन्छ।
डिस्ट्रिक अटर्नी न्यायधिवक्ता, हार्वी डेन्ट शहरलाई यस सङ्गठित अपराध मुक्त गर्नको लागि एक अभियानको अगुवाई गर्छन्, ताकी नागरिकहरू सुरक्षित पूर्वक जिउन सकुन्। पुलिस गोर्डन मार्फत, उनी ब्याटम्यानलाई पनि साझेदार बन्न आग्रह गर्छन्। गार्डन त्यो पाँच बैंकको नाम दिएर सर्च वारेन्ट जारी गर्छन्, जुहाँ माफियासँग गुप्त करार हुन्छ। त्यहीबेला वेयन इन्टरप्राइजेज का सि.इ.ओ लुसियास फक्स, चिनियाँ अकाउन्टेन्ट लाउको आधिकारिक रेकर्डमा सन्देह हुनाले उनको सम्झौता रद्द गर्छन्। ब्रुस वेयन डिस्ट्रिक अटर्नी लाई आगामी चुनावको लागि फन्डरेजेर दिने कुरा गर्छन्।
ब्रुस बाध्य भएर ब्याटम्यानको पहिचान बताउने निर्णय गर्छन्, अर्को दिन पत्रकार सम्मेलनमा डेन्ट, ब्रुसले केहि गर्नु भन्दा पहिले नै, सबैको सामुन्ने आफू नै ब्याटम्यान भएको खुलासा गर्छन्। डेन्टलाई सुरक्षा निगरानीमा कस्टडीमा लिइन्छ। बीच बाटोमा जोकर आफ्नो हतियारबन्द समुहको साथ घेराबन्दी तोड्दै डेन्ट माथि अचानक हमाला गर्छ। ब्याटम्यान यो हमलामा डेन्टलाई बचाउँछन् र गार्डन, जसले आफ्नो मृत्युको अफवाह फैलाएको थियो, जोकरलाई गिरफ्तार गर्न सफल हुन्छन्। गोर्डनलाई मेयरले कमिश्नर पदमा पदोन्नती गर्छन्। तर चाडै नै डेन्ट र रेचल वेपत्ता भएको सुचना आउँछ, जसलाई पहिले नै जोकरद्वारा नियन्त्रित पुलिसकर्मी उनीहरूलाई हरण गरेका हुन्छन्। ब्याटम्यान सोधपुछको लागि जोकरको राम धुलाई गर्छन् र भन्छन् कि रेचल र डेन्ट लाई अलग ठाउँमा विस्फोटक संगै बन्धक बनाइएको छ। ब्याटम्यान तब रेचल र गोर्डन डेन्टको उद्धारको लागि निस्कन्छन्। तर ब्याटम्यान लाई जोकरले दिएको ठेगानामा डेन्ट हुन्छन्। त्यसै बेला भवनमा बिष्फोट हुन्छ र डेन्टको आधा अनुहार जलेकाले उसलाई अस्पताल भर्ना गरिन्छ। रेचललाई बचाउन गोर्डन असफल हुन्छन्। यस्तो अस्तव्यस्तको माझ जोकर लाउलाई लिएर जेलबाट भाग्छ।
कल्मेन रिज, जो वेयन इन्टरप्राइजेजमा अकाउन्टेन्ट हुन्छन्, जसलाई कम्पनिको फाइल जाँचको दौरान टम्बलर गाडी वाहनको डिजाइन सम्बन्धित कागज मिल्छ। र ब्याटम्यानको पहिचान सार्वजनिक गर्ने प्रचार गर्छ। उता जोकर माफियाको मिलेको पैसाले लाउलाई जिउँदै जलाउँछ, र चेचेनलाई पनि मारीदिन्छ।
रिजको दाबीमा आफ्नो मत राख्दै जोकर टिभीमा भन्छन् कि "अब मलाई ब्याटम्यानको को हो भन्ने जान्न पर्दैन। "जोकरले फेरी टिभीबाट धम्कि दिन्छन् कि "यदि रिजलाई चाडै नै नमारे देखि, म एउटा अस्पताललाई उडाइदिन्छु।"। त्यसैले रिज सर्वसाधारणको निशाना बन्छ। गोर्डन गोथम शहरको हरेक अस्पताल खाली गर्ने निर्देशन दिएर रिजको सुरक्षाको लागि निस्कन्छन्। ब्रुसले गोर्डनलाई पुलिस वायरलेसबाट सुचना दिएर रिजलाई बचाउँछन्। जोकर अस्पतालमा डेन्टलाई खोजेर, उसलाई रिचलको मृत्युको बदला लिन उक्साउँछन्। आखिरमा अस्पतालमा बिस्फोट गरेर, बन्धकले भरिएको बसमा जोकर भाग्छ। डेन्ट रेचलको मृत्युको बदलाको लागि रेचलको मृत्युको जिम्मेवार खोज्छ, र आखिरमा मरोनीलाई मार्छ।
त्यहि रात, दूई पानी-जहाजमा बस्फोटक राखिएको जानकारी मिल्छ, जुन मध्ये एकमा आम सर्वसाधारण नागरिक र अर्कोमा कैदीहरूलाई उनीहरूको यथास्थानमा पुर्यैइदै थियो। जोकर रेडियोमा दुवै जहाजमा रहेका मानिसहरूलाई भन्छन् कि "मध्य-रातमा म दुवै जहाजलाई उडाइदिन्छ तर यदि एकले अर्को जहाजलाई उडाउँछ भने म त्यो जहाजलाई बक्स दिन्छु। उनीहरूलाई बाच्नु छ भने अर्को जहाजलाई बस्फोट गर। त्यसैले चाडो निर्णय गर्नु होला किनकी अर्को जहाजमा रहेकाहरू त्यति दयालु नहुन सक्लान् "। दुवै जहाजका यात्री यसलाई नकार्छन्। तब सम्म ब्याटम्यान र स्वाट टिम जोकरको बिल्डिङमा गएर अन्य बन्धकलाई बचाउँछन्। ब्याट-म्यानले जोकरलाई समाउँछ र जोकरले भन्छ कि "मैले त्यो सेतो सिपाही डेन्टलाई भ्रस्ट गरी दिए र अब उसले त्यही गर्छ जुन ऊ चाहन्छ"।
उता गोर्डन त्यही जर्जर बिल्डिङ मा पुग्छन् जहाँ रेचलको मृत्यु भएको थियो र अब त्यही डेन्ट बन्दुक ताकेर डेन्टको परिवारको साहारा आफ्नो बदला पुरा गर्न लाई धम्काउँछ। ब्याटम्यान मामिला समाधान गर्ने प्रयास गर्छन् तर डेन्ट उसलाई गोली हान्छ। डेन्ट सिक्का उठाएर गोर्डनको छोरालाई दाउमा लगाउनु भन्दा पहिले नै ब्याटम्यानले डेन्टलाई भवनबाट धकेलेर डेन्टको मृत्यु हुन्छ। डेन्टको मृत्युको दोष ब्याटम्यान आफूले लिन्छन् र गोर्डनसँग डेन्टको आदर्शवादी पहिचान जोगाइ राख्न डेन्टको दोषमा पर्दाले छोप्न भन्छन्। गोर्डन अनिच्छाले ब्याटम्यानलाई भगौडा करार दिएर उसको पिछा गर्नुपर्ने हुन्छ।
2. कलाकार / भूमिका
आधिकारिक वेबसाइट वार्नर ब्रोस
आधिकारिक वेबसाइट डिसी कमिक्स
Wikipedia: द डार्क नाइट (चलचित्र)